प्रकाशित मिति : बुध, चैत ११, २०७७
- चन्द्रकला बास्कोटा निवर्तमान अध्यक्ष, महिला उद्यमी संघ भक्तपुर (प्रोपाइटर रिजाल प्लाष्ट्रिक उद्योग)
विराटनगरमा २०५८ सालबाट उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नुभएकी चन्द्रकला बास्कोटा हाल भक्तपुर ठिमीमा रिजाल प्लाष्टिक उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ । वहाँ महिला उद्यमी संघ भक्तपुरको निर्वतमान अध्यक्ष समेत हुुनुहुन्छ । विभिन्न सामाजिक सेवामा संलग्न हुनुभएकी बास्कोटा न्यू विजनेस अवार्डबाट समेत सम्मानित हुनुभएको छ । उनै बास्कोटास“ग विद्युत संसार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक रामप्रसाद पौड्यालले गर्नुभएको कुराकानी संक्षिप्तमाः
निवर्तमान अध्यक्ष, महिला उद्यमी संघ भक्तपुर (प्रोपाइटर रिजाल प्लाष्ट्रिक उद्योग)
उद्योगीको रुपमा कसरी स्थापित हुनपुग्नु भयो ?
२०५८ सालमा विराटनगरबाट मेरो यात्रा सुरुभएको हो परिवारको सहयोग भएकोले असहज अवस्थालाई पनि सहज रुपमा अगाडि बढायौँ । २०६६ सालमा मैले श्रीमान गुमाउन पुगे त्यसपश्चात मैले कसैको सहारा विना नै भक्तपुरको ठिमीमा उद्योग स्थापना गरेर आज यो अवस्थामा आईपुगेको हुँ ।
एकल महिला भएकै कारण प्रशासनिक झमेलाहरु समेत बेहोर्नु प¥यो । सरकारी कार्यालयमा जादाँ विभिन्न बाहना बनाएर काम रोकिएका घटना धेरै छन् । यसैले महिलाहरुलाई जुनसुकै क्षेत्रमा संलग्न हुनपनि धेरै कठिनाईहरु पर्दछन् ।
विभिन्न कठिनाईका बीच पनि आज चन्द्रकला बास्कोटा महिला उद्यमी भनेर सबैको सामु परिचय दिदाँ खुसी लाग्दछ ।
रिजाल प्लाष्टिक उद्योग भनेको के हो ?
नेपालमा भएका प्लाष्टिकका ट्याङ्कीहरु छन् तिनीहरुको बिर्को बनाउने फ्याट्री हो । चितवन, पोखरा, विराटनगर देखि भद्रपुर सम्ममा मेरा प्रडक्ट खपत हुन्छन् । मेरो याट्रीबाट प्लाष्टिकका सबै प्रकारका भाडा बनाउन सकिन्छ यस विषयमा पनि विस्तारै योजना बनाउँदै छु ।
नेपाली उद्यमी र विदेशी उद्यमीहरुमा धेरै भिन्नता पाईन्छ किन ?
धेरै फरक छ किनकी यहाँ दृढ इच्छाशक्ति छ पैसा छैन तर विदेशी मुलुकमा ऋण नै लिँदा पनि व्याज तिर्नु पर्दैन । यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । विदेशी उद्योग एउटा सिस्टममा चल्छ तर नेपालमा धेरै प्रकारका बेथितिहरुका कारण उद्योगी निरास र हतोत्साहित हुन पुगेका छन् ।
देशको उद्योगधन्दा स्थापना गर्न राजनैतिक भुमिका नै बलियो हुनुपर्दछ ।
नेपालमा आजको अवस्थाले देशको राजनैतिक नेतृत्वमा युवापुस्ता अपरिर्हाय जस्तै भइसकेको छ । व्यवसायमा राजनीति हुन्छ भने यसले कुनै सफलता पाउँदैन यसैले हाम्रो संघमा कुनैपनि राजनीतिको विषयमा कहिकतै कुरा उठ्दैन ।
मैले मेरो उद्योगबाट ३० प्रतिशत सम्म कर तिरेको छु तर सरकारबाट हामीले केही पाउन सकेका छैनौ ।
महिलाहरुलाई उद्यमी बनाउन कस्तो प्रेरणा दिनुहुन्छ ?
महिलाहरुका लागि समाज त परैको कुरा परिवारबाटै पनि सहयोग पाइरहेका हुँदैनन् । तर एउटा महिलाले आफु उद्यमशिल बन्छु भनेर दृढसंकल्प गर्ने हो भने असम्भव भन्ने केही पनि छैन् । पहिले घर, टोल र राष्ट्र बनाउने भनेर लाग्नुपर्दछ ।
६ वर्ष अगाडि १० जना महिला उद्यमी भेट्न गा¥ह्रो थियो तर आज १७० भन्दा धेरै विभिन्न किसिमका उद्यमी महिलाहरु हुनुुहुन्छ । सबै जना आ–आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुनुहुन्छ । आजभोली महिलाहरुलाई परिवारिक वातावरण पनि राम्रो हुने गर्दछ यो राम्रो पक्ष हो ।
महिला सबलीकरण कि आरक्षण हुनुपर्ने हो ?
महिला सबलिकरण हुनुपर्दछ, आरक्षण होइन यसैले उद्यमशिल बन्ने सोच बनाईरहनु भएका आम महिलाहरुलाई सकारात्मक सोच लिएर आउनुस् असम्भव भन्ने केही छैन भन्न चाहान्छु ।
महिला उद्यमी बन्न आफु के व्यवसाय गर्ने त्यसमा दृढसंकल्प गरेर आफ्नै नाममा उद्योग दर्ता हुनुपर्दछ । एकै पटक ठूलो सोच बनाएर होईन सानै व्यवसायबाट पनि उद्यमीमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुपर्दछ । प्रक्रियामा जादँै गर्दा केही समस्या आएको छ भने हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौ ।
थोरै पुँजी भएका महिलाहरु उद्यमी बन्नका लागि संघले कस्तो सहयोग गर्दछ ?
संघले आर्थिक सहयोग नै गर्ने कुरा चाँही होईन । तर उनीहरुलाई प्रशासनिक देखि अन्य क्षेत्रमा कस्ता समस्या पर्दछ ती समस्याहरुको हल गर्नका लागि सुझाव दिने गर्दछौ । अहिले महिलाहरु समुह बनेर काम गर्दा विभिन्न बैंक, लघुवित्त, माइक्रो फाईनान्सहरुले पनि महिला उद्यमीहरुलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
उद्यमी बन्ने सोच बनाईरहेका महिलाहरुलाई हामीले महिला उद्यशिलताको तालिम दिने गर्दछौ जसले गर्दा उद्यमशिल बन्ने सोच गरेका महिलाहरुलाई अझ आत्मबल बढ्ने छ । हाम्रो संघ लगभग ६० जिल्लामा पुगेका छौ केही समयमा नै ७७ वटा जिल्लामा पु¥याउने योजनामा
तपाईको भावि योजना कस्ता छन् ?
अहिले चलिरहेकै व्यवसायलाई अझ माथि पु¥याउने योजनामा छु ।
कोरोना पश्चात् नेपाली उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोना महामारीका कारण ८/९ महिना बन्द भए पश्चात् दशौँ पछिबाट मात्र उद्योगहरु सञ्चालनमा आए । उद्योग सञ्चालन गर्दै गर्दा महामारीका कारण आर्थिक संकटकै अवस्था आयो कार्यरत कर्मचारीलाई तलब दिन नै मुस्किल परेको अवस्था थियो । आफुलाई विभिन्न समस्या बेहोरेर पनि कर्मचारीलाई टिकाउने काम गरेको थिएँ ।
सरकारले यस्तो महामारीमा उद्यमीहरुलाई कुनै राहत ल्याउन सकेन । महामारी पछिपनि भन्नकै लागि त विभिन्न बैंकहरुले महिला उद्यमीहरुको लागि विना धितो ऋणको व्यवस्था छ भन्दै आएका छन तर यो भनाईमा मात्रै नै सीमित छ । सरकारको यस विषयमा नीतिगत त्रुटी देखिन्छ ।
यस्ता समस्याका सुधार कसरी गर्न सकिएला ?
प्रमुखत्ः यस्ता विषयमा राज्यले नै ठूलो भुमिका खेल्नुपर्दछ तर राज्य निरिह बनिरहेको अवस्था छ । हाम्रा समस्या केही समय अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पनि राखेका थियौ तर उहाँले पनि समस्या समाधानका उपाय देखाउन सक्नु भएन ।
देशको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित भएको उद्योगहरुलाई कसरी उचाईमा लान सकिन्छ भन्नेमा हामी लागी परेका छौ तर सरकारको वेवस्थाका कारण सफल हुन सकेको छैन् । देशबाट दैनिक हजारौं युवा विदेशी रहँदा सरकारले यस विषयमा सोच्नै पर्दछ ।